Heverinao ve izany? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Mino ve ianao?
Tsy fantatr'i Maria sy Marta izay tokony hoeritreretin'i Jesosy rehefa tonga tao an-tanànany izy efatra andro taorian'ny nandevenana an'i Lazarosy. Rehefa niharatsy ny aretin 'ny rahalahiny, dia nangataka an'i Jesôsy izy ireo, izay fantatr'izy ireo fa mahasitrana azy. Nihevitra izy ireo fa satria tena sakaizany i Lazarosy dia ho avy manatona azy i Jesosy ary hanao izay tsara rehetra. Nefa tsy izany no izy. Toa nanan-javatra lehibe kokoa izay tokony hataon'i Jesosy. Dia nijanona teo amin'izay nisy azy izy. Nilaza tamin’ny mpianany izy fa matory i Lazarosy. Nihevitra izy ireo fa tsy azony fa maty i Lazarosy. Toy ny mahazatra, izy ireo no tsy nahazo.
Rehefa tonga tany Betania i Jesosy sy ireo mpianatra, izay nipetraka tao amin'ireo rahavavy sy anabavy, dia nilaza tamin'i Jesoa i Marta fa efa manomboka mihalevona ny vatan'ny rahalahiny. Somary diso fanantenana loatra izy ireo ka niampanga an'i Jesosy fa hiandry ela loatra mba hanampy ilay namany tsy ho faty.
Mety ho diso fanantenana ihany koa aho - na, mety kokoa, tezitra, ho tezitra, tezitra, hamoy fo - tsy izany ve ianao? Nahoana no navelan'i Jesosy maty ny rahalahiny? Izany no izy, nahoana? Matetika isika no mametraka fanontaniana mitovy amin'izany ankehitriny - nahoana Andriamanitra no namela ny havako ho faty? Fa maninona no navelany hitranga izany na loza hafa? Raha tsy misy valiny, dia tezitra amin'Andriamanitra isika.
Fa i Maria sy Marta, na dia diso fanantenana, nandratra ary kely tezitra, dia tsy nihodina izy. Ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 11 dia ampy mba hanomezana toky an'i Marta. Ny ranomasony ao amin'ny andininy 35 dia nampiseho tamin'i Maria fa tena liana izy.
Ireo teny ireo ihany no mampionona sy mampitony ahy anio amin’izao fanomanana indroa izao hankalazana ny tsingerintaona nahaterahana sy ny alahady Paska, ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Ao amin'i Johannes 11,25 Tsy nilaza i Jesosy hoe: “Aza manahy, ry Marta, fa hanangana an’i Lazarosy aho.” Hoy izy taminy: “Izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino Ahy dia ho velona na dia maty aza”.
Izaho no fitsanganana amin'ny maty. Teny mahery. Ahoana no nahafahany nilaza izany? Fahefana manao ahoana no nahafahany nametraka ny ainy ho amin’ny fahafatesana sy namerina izany? (Matio 26,61). Fantatsika izay tsy mbola fantatr’i Maria, Marta, Lazarosy ary ny mpianatra, fa vao fantatra taty aoriana: Jesosy dia Andriamanitra, dia Andriamanitra ary ho Andriamanitra mandrakariva. Tsy vitan’ny hoe manangana ny maty izy, fa izy koa no nanangana ny maty. Midika izany fa izy no fiainana. Raiki-tampisaka ao amin’Andriamanitra ny fiainana ary mamaritra ny maha-izy azy. Izany no iantsoany ny tenany hoe: IZAHO.
Ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako dia nahatonga ahy hieritreritra ny fiainana, ny fahafatesana ary ny zava-mitranga aorian'io. Rehefa namaky ireo teny nolazain'i Jesosy i Marta ity aho dia midika izany fa manontany ahy izy. Mino ve ianao fa mino aho fa fitsanganana amin'ny maty izy ary fiainana? Heveriko ve fa ho velona indray aho na dia fantatro aza fa tsy maintsy maty tahaka ny olon-drehetra aho satria mino an'i Jesosy? Eny, ataoko. Ahoana no hahafahako mankafy ny fotoana sisa tavela raha tsia?
Satria nanolotra ny fiainany i Jesosy ary nanaiky azy io indray, satria foana ny fasana ary nitsangana i Kristy dia ho velona indray aho. Mirary Paska ary ho ahy fitsingerenan'ny andro nahaterahana sambatra!